सी हरेक वर्ष घरेलू उपकरण थप "बुद्धिमान" र आधुनिक बन्ने - त्यहाँ नयाँ इलेक्ट्रनिक उपकरण र समय छोटो सम्भव अवधिमा स्वादिष्ट र स्वस्थ खाना पकाउन सक्षम उपकरणहरू छन्। यस्तो उपकरणहरू को एक प्रेरणा कुकर छन्। यी उपकरणहरू को फाइदा र बेफाइदा आज हाम्रो लेखमा छलफल गरिनेछ।
वैश्विक बजार को उद्भव
अरू सबैलाई भन्दा पछि आविष्कार थियो रूपमा यो प्रविधी, उनको सहयोगिहरु को पृष्ठभूमिमा कान्छो छ। केही वर्ष पहिले, प्लेट को मात्र दुई प्रकार पसलहरुमा खरिद गर्न सकिन्छ - ग्याँस वा बिजुली। हालै तथापि, थप र थप विक्रेताहरु ठ्याक्कै प्रेरणा कुकर प्रदान गर्न थाले। फाइदा र यी उपकरणहरू को बुरा, हामी पछि एक सानो देखो, तर अहिले के यस्तो प्रविधी हो गठन र के यो एक गृहिणी लागि उपयोगी छ पत्ता गरौं।
थप प्लेट सिक्न हामी बारे आफ्नो कार्य को अल्गोरिदम कुरा। निम्नानुसार प्रेरणा कुकर को सञ्चालन सिद्धान्त हो। गर्मी स्रोत (सामान्यतया रातो-तातो फलाम पगाल्ने वा खुला ज्वाला) जो, बारी मा, यसको सतह मा राखिएको छन् उत्पादनहरु ऊर्जा स्थान्तरण भाँडा, heats। यो माछा धूम्रपान वा पकाउने बारबेक्यू (प्रसंगवश, यस्तो काम पनि प्रेरणा कुकर बोर्ड सामना गर्न सक्छौं) भने, गर्मी स्थानान्तरण प्रक्रिया ठाउँ यस्तो tableware रूपमा "मध्यस्थ" बिना अर्थात् सबै ऊर्जा उत्पादन गर्न स्रोत सिधै आपूर्ति छ लिन्छ। प्रेरणा, "ताप" को लागि रूपमा, त्यहाँ बेलामा मात्र प्लेट सबै संयन्त्र को समन्वित काम र उनको व्यञ्जन मा स्थित गर्मी को गठन सम्भव छ। खैर, यो छ एक प्रेरणा कुकर एक लामो समय को लागि आफ्नै हातले (कारण जटिल संरचना गर्न), यस क्षेत्रमा कुनै पनि स्वतन्त्र कार्य सुरक्षित गर्न के गर्न राम्रो छ मा त।
व्यक्तिगत ध्यान बर्नर। बाह्य, तिनीहरूले मात्र परिभाषित गर्न सकिन्छ ग्लास माटोको सतह आकृति मा बृताकार। यसको विपरीत, ग्याँस कुकर, तातो प्लेट डाटा "अतिरिक्त" ठाउँ लिन छैन र एकदम organically भान्सा को भित्री मा फिट। सहमत, यो डिजाइन धेरै आधुनिक Hob छ:
मुख्य तत्व पकाउने क्षेत्र, एक तार गर्न गर्मी आयोजित कि। प्लेट बिना बस खाना गर्मी छैन (र सबै काम गर्न बन्द)। यो तत्व Hob छ जो प्रत्येक पकाउने क्षेत्र अन्तर्गत स्थित छ। यी coils लागि 30-60 kHz को उच्च-आवृत्ति वर्तमान बित्दै। डिजाइन गरेर, तिनीहरूले ट्रांसफर्मर को घुमावदार प्राथमिक बढी reminiscent छन्। तर यसलाई यहाँ एक क्षण उल्लेख गर्नुपर्छ। प्राथमिक घटना प्रेरणा धाराहरु गर्न अपर्याप्त भएको घुमावदार।
त्यसपछि कसरी गरम छ?
यो धेरै सरल छ - प्राथमिक घुमावदार तार पक्षमा छ भने, त्यसपछि माध्यमिक धेरै व्यञ्जन छ। स्वाभाविक, सरल बर्तन को प्रयोग उपयुक्त छ। यहाँ यो एक विशेष ferromagnetic सामाग्री बनेको एक ट्यांक गर्न आवश्यक छ - भनेर प्रेरणा Hob प्रयोग गरिएको छ लागि बर्तन के। यसलाई समावेश Hob राखिएको भएपछि, तल प्रेरणा धाराहरु गराइएको गरिनेछ। तिनीहरूलाई धन्यवाद, र ताप उत्पादन उत्पादन गरिनेछ, सामान्य गर्मी उपचार को लागि पर्याप्त छ। पनि टिप्पण लायक को ferromagnetic गुण व्यञ्जन मात्र तल हुन सक्छ भन्ने छ - अन्य सबै भागहरु सरल सामाग्री देखि गर्न सकिन्छ। यो ताप व्यञ्जन र खाना को गर्मी उपचार को लागि पर्याप्त छ। हामी पूर्ण बुझे यी उपकरणहरू को प्राविधिक भाग। तल हामी के प्रेरणा कुकर र बेफाइदा छन् देखो हुनेछ।
प्रेरणा प्लेट को पहिलो फाइदा - एक उच्च दक्षता। अभ्यास ताप समयमा हुन्छ जो गर्मी, को लगभग 90 प्रतिशत, खाना तयार भइरहेको सीधा बित्दै भनेर देखाउँछ। ऊर्जा बाँकी, कि छ, 10 प्रतिशत र ताप, पैन आधार र ग्लास माटोको cooktop को पर्खालहरु जान्छ। एकै समयमा ग्यास चुलो को दक्षता तिनीहरूलाई उत्पन्न कुल गर्मी को 50 प्रतिशत भन्दा बढी छैन। यसबाहेक, गर्मी घाटा विद्युत analogs (लगभग 30 प्रतिशत प्रेरणा भन्दा उच्च) अवलोकन छन्। , तयारी 1.5-2 पटक छिटो एक प्रेरणा चुलो छ कि खाना यस सिद्धान्त धन्यवाद, र ऊर्जा लागत कम गर्दै छन्।
अर्को रोचक तथ्य: आगोको भट्टी को ग्लास माटोको सतह जलाए सक्दैन मा हुन। सारा "चाल" को Hob को निर्माण को एक विशेष सामाग्री छ। के तपाईं झुक्किएर प्रेरणा Hob को सतह छुन पनि सधैं सुरक्षित हुनेछ, कि ग्लास माटोको धन्यवाद। तर, संसारमा सबैले सही हो, त्यसैले बल्न को जोखिम (उदाहरणका लागि, 150-200 डिग्री को तेल तापमान संग तला आलु को तयारी मा) त्यहाँ अझै पनि छ। र लगभग शून्य तिनीहरूलाई कम गर्न, उत्पादकहरु विशेष संकेतक सेट - उपकरण सतह cooled छ कि आफूलाई गर्न सचेत हुनेछ। तसर्थ, प्रेरणा चुलो तपाईं सधैं सुरक्षित हुनेछ।
यो माटोको सतह बरु चाँडै ठंडा कि उल्लेख गर्नुपर्छ, त्यसैले तुरुन्तै पकाउने पछि, तपाईं सुरक्षित Hob को सफाई गर्न अगाडि बढ्न सक्छ। धातु अंगीठी र बर्नर सामान्य तापमान गर्न cooled सम्म ग्याँस को मामला मा, 30 वा बढी मिनेट सम्म प्रतीक्षा छ। त्यहाँ समय बचत गर्नुहोस्।
को भन्ने तथ्यलाई साथ Hob प्रेरणा कुकर तेजी शांत गर्ने क्षमता छ, यो विशेष छिटो ताप उल्लेख गर्नुपर्छ। तत्काल प्रायजसो मा पकाउने सतह हीटिंग सुविधाहरू पावर बूस्टर को उपस्थितिको कारण हो। यो प्लेट मा यसको आफ्नै निर्भर र स्वतन्त्र (मुख्य) बर्नर छ भन्ने हो। यो कस्तो अर्थ राख्छ? केही मिनेट लागि प्रमुख सबै तापीय ऊर्जा निर्भर मा "चयन" र यसरी पर्याप्त पकाउने समय कम।
साथै, प्रेरणा कुकर कि Hob प्रयोग अधिक आरामदायक र सुरक्षित बनाउन विभिन्न उपयोगी कार्य संग प्रदान गरिएको छ। निम्नानुसार धेरै बीचमा यो उल्लेख गर्नुपर्छ, "ब्लोट":
स्वचालित ताला प्लेट मोड सक्रिय।
मात्र बर्तन को सतह मा उपस्थिति मा प्रकार्य ताप प्लेट (बिजुली बचत)।
ताप को बाध्य बन्द, साथै अवशिष्ट गर्मी सूचक।
प्रेरणा कुकर विपक्ष
यो Hob मा Lows छ, अझै ती धेरै केहि। सारा तस्वीर प्रकट गर्न, अलग प्रत्येक बेफाइदा हेर्न।
मूल्य - यो सायद पहिलो बाधा, ग्राहकहरु repelling र सस्ता समकक्षों खरिद गर्न तिनीहरूलाई प्रोत्साहन छ। आगमनात्मक उपकरणहरू छ धेरै पटक थप अन्य बोर्डहरू भन्दा हो, त्यसैले सबैले यस्तो महंगा खरिद गर्न dares। विशेष, यस्तो देखावटी मूल्य अतिरिक्त कार्यहरु को एक सेट कारण छ।
के अरू प्रेरणा कुकर र बेफाइदा छन्? दोस्रो तिनीहरूलाई को कमी - एक साधारण ग्लास कन्टेनर मा ताप र खाना पकाउने को impossibility छ। frying र खाना पकाउने लागि खाद्य पदार्थ विशेष कन्टेनर आवश्यक पर्दछ। यो हामी ferromagnetic गुण भएको यो लेख, ग्लासवेयर, सुरुमा उल्लेख छ। तपाईं राम्रो खरिदका लागि बाहिर काँटा छैन त भने। र यो तपाईं ध्यान दिएर किन्न अघि त विचार र फाइदा र बेफाइदा वजन त्यो कुकर सबै, महंगी छ छ।
मार्गदर्शन चाप वेल्डिंग: वर्गीकरण, आवेदन, विशेष गरी
Accumulator: कार्य को सिद्धान्त। Accumulator: ताराहरु रेखाचित्र
मग खडा कसरी आयो र यसलाई कसरी भनिन्छ?
एनालग "Theraflu" सस्तो। दबाइ "Theraflu": को संरचना, समीक्षा र analogues को प्रयोग
एक निजी घरमा नलसाजी। उपकरण र पानी आपूर्ति प्रणाली स्थापना
पारिवारिक मनोचिकित्सा: यो कसरी प्रभावी छ?